စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်သတင်း! VIG မှအောက်ပါတိုက်ရိုက်ရောင်းဝယ်ရေးအားကစားပြိုင်ပွဲ Spartan slot, အနက်ရောင်စိန်နှင့် Box ကို 24 မှာမိုဘိုင်းအပေါ်ယခုရရှိနိုင်ပါသည်။ - အွန်လိုင်းကာစီနိုအပိုဆုကုဒ်များ
စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်သတင်း! VIG မှအောက်ပါတိုက်ရိုက်ရောင်းဝယ်ရေးအားကစားပြိုင်ပွဲ Spartan slot, အနက်ရောင်စိန်နှင့် Box ကို 24 မှာမိုဘိုင်းအပေါ်ယခုရရှိနိုင်ပါသည်။
အပေါ် Posted ဇူလိုင်လ 27, 2017 စာရေးသူ အင်ဒရူး	ဟာ Off comments စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်သတင်းအပေါ်! VIG မှအောက်ပါတိုက်ရိုက်ရောင်းဝယ်ရေးအားကစားပြိုင်ပွဲ Spartan slot, အနက်ရောင်စိန်နှင့် Box ကို 24 မှာမိုဘိုင်းအပေါ်ယခုရရှိနိုင်ပါသည်။
ကားရောင်းဝယ်ရေးအားကစားပြိုင်ပွဲမိုဘိုင်း Live! - က Black Diamond, Spartan slot, Box ကို 24
'' Purrfect အိမ်မွေး '- မကြာခင်မှာပဲလာ - Slotocash, မြို့ပြင်အေ့စ်, တရားမျှတသော Go ကို
ထိုင်းအစိုးရက Slotocash, မြို့ပြင်အေ့စ်နှင့်တရားမျှတသော Go ကိုကာစီနို 5th မေလ 17 မှလာမယ့် '' Purrfect ချစ်စနိုးအိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များ 'သစ်တစ်ခု 2017 Reel ဗီဒီယိုပေါက်လွှတ်သတ်မှတ်ထားကြသည်!
ကြောင်ချစ်သူများနှင့်ခွေးချစ်သူများရောနှော, Purrfect ချစ်စနိုးအိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များအတွက် display ကိုအပေါ်ကြည်ညိုဘွယ်ကောင်းသောတိရိစ္ဆာန်များအားဖြင့်ရီးရဲလ်အချိန် Gaming မှအသစ်စက်စက် 25 လိုင်း slot ကသဘောကျအောင်ဆက်ဆံပါလိမ့်မည်!
တစ်ဦးရိုင်းတို့ပါဝင်သည်သမျှသောဆုသုံးဆထားတဲ့ကာလအတွင်းကြောင်ရိုင်းဆု 10 အခမဲ့ဂိမ်းများ,! ဆုနှင့်အတူသုံးသို့မဟုတ်ထိုထက်ပိုန့ Dogs ကိုဆုချီးမြှင့် 10 အခမဲ့ဂိမ်းများနှစ်ဆတိုး။ ဒီ feature စဉ်အတွင်းအားလုံး Dogs ကိုအပိုဆောင်းကြောင်ရိုင်းအဖြစ်ဆောင်ရွက်ရန်။
တစ်ဦးကကျပန်းထွက်လာပါတယ်အင်္ဂါရပ်ကိုလည်း Doggy ဒေါ်လာ, မည်သည့်သာမန်ဂိမ်းလှည့်ဖျား၏အဆုံးမှာတောရိုင်းကြောင်ဒါမှမဟုတ်ကျပန်းစည်းစိမ်ဥစ္စာ Feature ကိုပေးအပ်နိုင်သည်!
3 နယူး AU ကမ်းတက်စာမျက်နှာများ - က Black Diamond, Box ကို 24, ကန္တာရ Nights
ယခုတပတ်ကျနော်တို့နောက်ကျောရုံးမှ3နယူး AU ကမ်းတက်စာမျက်နှာများဆက်ပြောသည်ပါပြီ။
ခြေရာခံခြင်းသည် Links များ> New> Affiliate Program ကို Create: ပြိုင်ဘက်> မြှင့်တင်ရေး: ကန္တာရ Nights AU $ 10 အခမဲ့> အမည်ကင်ပိန်း> Create
Links များခြေရာခံ> New> Affiliate Program ကို Create: Topgame> မြှင့်တင်ရေး: Black ကစိန် AU Pokies> အမည်ကင်ပိန်း> Create
Links များခြေရာခံ> New> Affiliate Program ကို Create: Topgame> မြှင့်တင်ရေး: Box ကို 24 AU Pokies> အမည်ကင်ပိန်း> Create
လအခမဲ့လှည့်ဖျား၏အဆုံး - Slotocash, မြို့ပြင်အေ့စ်, တရားမျှတသော Go ကို
အခမဲ့လှည့်ဖျားနှင့်အတူတရားမျှတသော Go ကိုများနှင့်အနီရောင် Stag, Slotocash, မြို့ပြင်အေ့စ်မှာဧပြီမှ Farewell ဆင့်ဆိုရမည်မှာ,
Slotocash - 25 အခမဲ့ဗိုင်းငင်
ကူပွန် Code ကို: TREASURE25ME
နေ့စွဲ Start: 04 / 29 / 2017 00: 00 EST
အဆုံးနေ့စွဲ: 04 / 29 / 2017 23: 59 EST
$ 200 max ကိုက c / o
မြို့ပြင်အေ့စ် - 25 အခမဲ့ဗိုင်းငင်
နေ့စွဲ Start: 04 / 30 / 2017 00: 00 EST
အဆုံးနေ့စွဲ: 04 / 30 / 2017 23: 59 EST
တရားမျှတသော Go ကိုကာစီနို - 20 အခမဲ့ဗိုင်းငင်
ကူပွန် Code ကို: ပူဖောင်း-20
နေ့စွဲ Start: 04 / 27 / 2017 00: 00 EST
$ 50 max ကိုက c / o
အနီရောင် Stag - 37 အခမဲ့ဗိုင်းငင်
ကူပွန် Code ကို: MAXCHERRY
အဆုံးနေ့စွဲ: 05 / 08 / 2017 23: 59 EST
ဂိမ်း: ချယ်ရီ Blossom
$ 150 max ကိုက c / o
400% $ 4000 မှတက်ကြိုဆိုပါတယ်
ကူပွန် Code ကို: STARTNOW
min သိုက် $ 25
အဘယ်သူမျှမ max ကိုက c / o
တရားမျှတသော Go ကိုအပ်ဒိတ်များ
ယခုတပတ်5Pokies (စ Slotocash နှင့်မြို့ပြင်အေ့စ်မှ) တရားမျှတသော Go ကိုမိုဘိုင်းမှဆက်ပြောသည်ခဲ့ကြသည်!
ဝိဇ္ဇာအတတ်အားဥယျာဉ်, အမြင့်ဖက်ရှင်, အသေးစား Fortune မဂ္ဂဇင်း T-Rex နှင့်စုန်းမရဲ့စိုက်ခင်းလုပ်ကိုင်မည် ယခုမိုဘိုင်း device ကိုပေါ်မှာရှိသမျှကစားသမားများအတွက်ရရှိနိုင်ပါသည်။ ဤသည် 54 မိုဘိုင်းပေါ်တွင်ရရှိနိုင်ပါသည် pokies ၏စုစုပေါင်းအရေအတွက်ကဆောင်တတ်၏,
အောက်ပါ Android ထုတ်ကုန်ကိုလည်းယခုထောက်ခံနေကြသည်:
အားလုံးအသစ်ကကစားသမား $ 300 + 300 အခမဲ့လှည့်ဖျားအထိတစ်ဦး 30% ပွဲစဉ်တွေနဲ့စုန်းမရဲ့စိုက်ခင်းလုပ်ကိုင်မည်ပေါ်ယခုစတင်ရန်နိုငျပါသညျ!
စုန်းမရဲ့စိုက်ခင်းလုပ်ကိုင်မည်ပေါ် $ 300 + 300 အခမဲ့လှည့်ဖျားရန် 30% အထိ
ကူပွန် Code ကို: 300BREWS
သက်တမ်းရှိ: ဧပြီ 27 - မေလ 3
Playthrough: (!) 30x (သိုက် + ဘောနပ်စ), 10x သာ spins
မက်စ်။ cashout: န့်အသတ်
$ 1500 ပြိုင်ပွဲ - မိုင်ယာမီကလပ်
အဆိုပါ '' Cinco de Mayo ပြိုင်ပွဲ '' မေလ 5th သည်အထိပြေး။ , La Fiesta featuring, ဒီပြိုင်ပွဲ, တကျိပ်တပါးသောရက်ပေါင်းကြာန့်အသတ် rebuys features များနှင့် $ 1000 တစ်ဦးပထမဦးဆုံးအရာအရပျဆုပေးထားပါတယ်။
အမည်: Cinco de Mayo ပြိုင်ပွဲ
ဂိမ်း:, La Fiesta
နေ့စွဲ: 26 ဧပြီ -6မေလ
$ 5.00 in: Buy
ဆုကို: $ 1500 (1st ဆု $ 1000)
သင်၏နောက်သိုက်အပေါ်တစ်ဦး 150% ပွဲစဉ်များအတွက်ကူပွန်ကုဒ် MAYFLY ကိုသုံးပါ* ယခုမေလ 1st အကြား $ 150 ဦးရေအများဆုံးဆုကြေးငွေရန်။ ငွေဆုပ်အပေါ် PLUS 100 အခမဲ့လှည့်ခြင်းများ!
* ဧပြီ 1 နှင့်မေလတွင် 28 1 အကြား 2017 ဝယ်ယူဘို့ကူပွန်ခိုင်လုံသော။ နိမ့်ဆုံးသိုက် $ 35 ဖြစ်ပါတယ်။ အများဆုံးဆုကြေးငွေ $ 150 ဖြစ်ပါတယ်။ စံသတ်မှတ်ချက်များနှင့်အခြေအနေများလျှောက်ထား
ပူပြင်းတဲ့ကမ်းလှမ်းချက် - slot မြို့တော်, ကန္တာရ Nights
ဘာသာရေး Wolf ကအပေါ် $ 77 + 385 အခမဲ့လှည့်ဖျားမှတက် 77% အပိုဆု
* မြှင့်တင်ရေးအမည်: MYSTICWEEKEND / သက်တမ်းရှိ: သောကြာနေ့ - တနင်္ဂနွေ, တစျနေ့ / Playthrough ပြီးတာနဲ့: Allowed 30x (သိုက် + ဘောနပ်စ) / အားကစားပြိုင်ပွဲ: အားလုံး slot, Scratch ကဒ်များ & သင့်ပင်လယ်ဓားပြ / No max ကိုငွေသားထွက်သိုက်ဆုကြေးငွေအပေါ် | အခမဲ့လှည့်ခြင်းများအပေါ် 5x max ကိုငွေသားထုတ်
TENSUNS250 - $ 250 မှ 1250% အထိ
* မြှင့်တင်ရေးအမည်: TENSUNS250 / သက်တမ်းရှိ: 26 - 30th ဧပြီ / Playthrough: Allowed 45x (သိုက် + ဘောနပ်စ) / အားကစားပြိုင်ပွဲ: ဆယ်ပါး Suns / No max ကိုငွေသားထုတ် / အောင်မင်းထွက်ခွာ: $ 25
15 အခမဲ့ Leovegas ကာစီနိုမှာဆုကြေးငွေ spins
ဒါကြောင့်ကာစီနိုမှာ 155 မျှသိုက်ဆုကြေးငွေ
85 အခမဲ့ Redbet ကာစီနိုမှာလောင်းကစားရုံ spins
95 အခမဲ့ WickedJackpots ကာစီနိုမှာဆုကြေးငွေ spins
Argo ကာစီနိုမှာ 85 မျှသိုက်ဆုကြေးငွေ
115 အခမဲ့ Slots500 ကာစီနိုမှာလောင်းကစားရုံ spins
Stanjames ကာစီနိုမှာ 25 မျှသိုက်ဆုကြေးငွေ
120 အခမဲ့ Igame ကာစီနိုမှာလောင်းကစားရုံဆုကြေးငွေ spins
Sverige Kronan ကာစီနိုမှာ 140 အခမဲ့လှည့်ခြင်းများ
105 အခမဲ့ Winzino ကာစီနိုမှာဆုကြေးငွေ spins
145 အခမဲ့ကံကောင်းပါစေကာစီနိုမှာဆုကြေးငွေ spins
65 အခမဲ့ဆွီဒင်ကာစီနိုမှာလောင်းကစားရုံဆုကြေးငွေ spins
95 Insta ကာစီနိုမှာအဘယ်သူမျှမသိုက်လောင်းကစားရုံဆုကြေးငွေလွတ်မြောက်
115 GDay ကာစီနိုမှာအဘယ်သူမျှမသိုက်လောင်းကစားရုံဆုကြေးငွေလွတ်မြောက်
20 အခမဲ့ Cashmio ကာစီနိုမှာဆုကြေးငွေ spins
SimbaGames ကာစီနိုမှာ 165 အခမဲ့လှည့်ခြင်းများ
90 အခမဲ့ finlandia ကာစီနိုမှာလောင်းကစားရုံဆုကြေးငွေ spins
45 Staybet ကာစီနိုမှာအဘယ်သူမျှမသိုက်ဆုကြေးငွေလွတ်မြောက်
ကာစီနိုဒီမှာမှာ 130 မျှသိုက်ဆုကြေးငွေ
65 အခမဲ့ PrimeSlots ကာစီနိုမှာဆုကြေးငွေ spins
155 အခမဲ့ SlotsandGames ကာစီနိုမှာလောင်းကစားရုံဆုကြေးငွေ spins
Leovegas ကာစီနိုမှာ 175 မျှသိုက်လောင်းကစားရုံဆုကြေးငွေ
0.1 ကားရောင်းဝယ်ရေးအားကစားပြိုင်ပွဲမိုဘိုင်း Live! - က Black Diamond, Spartan slot, Box ကို 24
0.2 '' Purrfect အိမ်မွေး '- မကြာခင်မှာပဲလာ - Slotocash, မြို့ပြင်အေ့စ်, တရားမျှတသော Go ကို
0.33နယူး AU ကမ်းတက်စာမျက်နှာများ - က Black Diamond, Box ကို 24, ကန္တာရ Nights
0.4 လအခမဲ့လှည့်ဖျား၏အဆုံး - Slotocash, မြို့ပြင်အေ့စ်, တရားမျှတသော Go ကို
0.5 တရားမျှတသော Go ကိုအပ်ဒိတ်များ
0.6 $ 1500 ပြိုင်ပွဲ - မိုင်ယာမီကလပ်
0.7 ပူပြင်းတဲ့ကမ်းလှမ်းချက် - slot မြို့တော်, ကန္တာရ Nights
3 ကာစီနိုဆုကြေးငွေ 2019: